Godina Wallagga Bahaatti qawween Kilaashinkoovii 16 fi magaazinni rasaasaa 17 qabame - BBC News Afaan Oromoo
Godina Wallagga Bahaatti qawween Kilaashinkoovii 16 fi magaazinni rasaasaa 17 qabame
12 Caamsa 2019
Image copyright Fuula Feesbuukii Kominikeeshinii magaalaa Naqamtee
Meeshaan waraanaa qawwee Kilaashinkoov jedhamu konkolaataa Koodii 3 AA lakk. Gabatee isaa 34152 tahetti Gambeellaa irraa gara Gondaritti osoo dabarfamaa jiruu to'atamuu poolisiin godina Wallagga Bahaa hime.
Kaleessa gara sa'aa shaniitii Godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa bakka maqumsa Bedellee jedhamutti eeruu arganneen Kilaashinkoovii 16 fi magaazina rasaasaa 17 to'achuu Komaander Garramuu Asaffaa I/G Q/Poolisii Godina Wallagga Bahaa BBCtti himaniiru.
Komaander Garramuun karaa argamuu fi hubachuu hin danda'amneen kuusaa boba'aa ykn taankerii boba'aa baqaqsuun erga keessa kaa'anii boba'aa irratti naqanii akka deemaa turan himan.
Konkolaataan meeshaa itti fe'anii deemaa turan Laandi Kiruuserii konkolaataa manaati jedhan Komaanderichi.
''Ofumakoon miseensa poolisii waliin deemeen to'anne'' kan jedhan komaander Garramuun eeruu Gambeellaa irraa nu gaheen to'achuu dandeenye jedhan.
Image copyright Kominikeeshinii magaalaa Naqamtee
Goodayyaa suuraa Qawwee Gambeellaa irraa gara Gondaritti osoo darbuu Wallagga Bahaatti qabame.
Namootni meeshaa waraanaa kana fe'anii deemaa turan jiraattota magaalaa Gondaridha kan jedhan Komaander Garramuun tokko konkolaachisaa yoo tahu tokko ammoo daldaalaadha jedhan.
Torban lama duras konkolaataa barbaree fe'ee deemaa ture eeruu arganneen sakatta'uun qawwee Kilaashinkoovii 59 to'achuu isaanii himan.
Kunis Gambeellaa irraa gara Goondar osoo geeffamuuti kan jedhan Komaander Garramuun meeshichi bifa adda baasuun ulfaatuun konkolaataa FSR irratti fe'amee ture jedhan.
Konkolaataa FSR sakattaanee erga dhabnee booda ittuma fufnee yoo ilaallu qaama konkolaatichaa irratti laameeraadhaan duubaan irratti hojjechuun keessa naqanii ture jedhan.
Haala ittiin meeshaa dabarsuuf yaalan kan nama hin shakkisiifnee fi sakatta'insaan illee argachuuf ulfaatudha jedhan.
''Haasaawwan jibbiinsaa ittisuuf labsiin qophaa'aa jira''
Baalli sammuu hadoochu keeshaan 37 to'atame
Meeshaan waraanaa baay'inaan karaa Gambeellaa galee gara naannoo sadiitti baay'inaan akka darbaa jiru hordoffiin taasisaa turre namatti agarsisa jedhan Komander Garramuun.
Akkasuma Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuuttis ji'a darbe keessa shugguxiin 15 qabamee ture jedhan. Daddabarsi meeshaalee waraanaa bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa tureen qabamaa akka jiru yeroo garaagaraatti gabaafamaa tureera.
Erga MM Abiy Ahimed gara aangootti dhufanii daddabarsi meeshaalee waraanaa karaa seeraan alaa biyya keessatti dabaluu isaa Poolisiin federaalaa beeksisse ture.
Daddabrsa meeshaalee seeraan alaa kanaafis labsiin bahaa akka ture himamaa ture.
Meeshaalee waraanaa niikulaarii
Baalli sammuu hadoochu keeshaan 37 Keellaa Yaabellootti to'atame
17 Elba 2019
Awwol Aloo: ''Mootummaa buusuufi dimokiraasii fiduun waladda''
Ayyaana ijoollee Irreecha dura kabajaman
Gosa tumaa shamarran Oromoo bareedinaaf tumatan
'Gurrachummaan arrabsamuunkoo caalaa na jabeessa'
Keeniyaan lakkoofsa manaa fi Uummataaf poolisii kuma 140 bobbaafte
Xiyyaarri Tanzaaniyaa sababa qonnaan bulaan uggurame
Raashford gurraachummaa isaan arrabsame
Hanna hawaa keessatti raawwatamuun shakkame